Myanmar’s first hostel Startup Plans to Bring Silicon Valley Culture to the country | Myanmar Business Today
HomeMyanmar’s first hostel Startup Plans to Bring Silicon Valley Culture to the...
CK Goyal, co-founder of Draper Startup House
Despite its “rawness”, Myanmar’s economy looks set to grow by 6.4 percent in fiscal 2019-20, up from 6.3 percent last fiscal year, bolstered by growing investment in the transport and telecom sectors and planned infrastructure spending by the government before the 2020 elections, according toaWorld Bank report released January 15.
Thanks toasignificantly large youth population and the government’s effort to boost investment, Myanmar’s startup ecosystem is thriving.
“We want to bring Myanmar to the rest of world and the rest of world to Myanmar,” emphasized Goyal.
“We started our company with human connections and our goal is to continue our mission withaproper human connection – enabling one million entrepreneurs by 2030,” he added.
Draper Startup House Yangon တွင် ရှိနေတတ်သည့်အရာ သုံးခုရှိသည်။ ယင်းတို့ကား ပေါ်ထွန်းစလုပ်ငန်းငယ်များ၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များဖြစ်သည်။ အဆိုပါ hostel ရှိ ထိုင်စရာနေရာတွင် ထိုင်ရင်း ဘေးက စားပွဲဝိုင်းများမှ ပေါ်ထွန်းစ လုပ်ငန်းများ၊ vcများ၊ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အလွတ်တန်းအလုပ်လုပ်သူများထံမှ တီးတိုးပြောသံများက နားထဲသို့ စီးဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်ရှိသော Tribe Theory Hostel မှာ Draper Startup House(DSH) ဟု အမည်ပြောင်းထားသည့် စင်ကာပူအခြေစိုက် hostel လုပ်ငန်းစုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ hostel တွင် လာရောက်နေထိုင်၊ လုပ်ကိုင်သူများအတွက်တော့ Draper Startup House Yangon မှာ ခေါင်ခိုက်နေသော အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်များနှင့် အတည်တကျမရှိ၊ အလျော့အတင်းရှိသော ယနေ့ခေတ် လုပ်ငန်းခွင် ယဥ်ကျေးမှုတို့၏ ခေါင်းကိုက်စရာအခြေအနေများအတွက် ဖြေဆေးပင်။
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတွင် အဆိုပါ hostel သည် ဘာလီ၊ စင်ကာပူ၊ ရန်ကုန်၊ အက်စတိုးနီးယား၊ မနီလာ၊ လစ်စ်ဘွန်နှင့် ဘင်္ဂလောတို့အထိပင် ချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
hostel မှာ ဆိတ်ငြိမ်သော လမ်းကလေးထဲတွင် အရေးပါသော ခံစားချက်ကို ပေးရုံမက ခရီးသွားများအတွက်လည်း အရောင်အသွေးစုံပြီး အိမ်ပုံစံ အပြင်အဆင်နှင့် စောင့်ကြိုနေသည်။ အတူစုပေါင်း ထားသည့် အခန်းကျယ်တွင် capsule အိပ်ယာများကို အလုပ်အတူတူလုပ်ကိုင်သည့်နေရာ၏ စွန့်ဦးတီထွင်မှုဝန်းကျင်ကောင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဤ hostel သည် လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်သူအသိုင်းအဝိုင်းကို တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
Previous articleFacebook Closes Fake Accounts Allegedly Linked to Mytel, Viettel
Next article‘Eat, Sleep and Play’: Atari to Open Video Game-Themed Hotels